Amba Maan Tahriibin W/Q: Mahad M. Qaasim
Sunday May, 27 2018 - 14:40:28
Monday January 30, 2017 - 15:31:29 in by salman abdi
Waa gaban noloshiisa toban jir iyo dhiidhii in ka badan ku soo qaatay miyI iyo raacidda meesinnada kala duwan ee ay la haayeen.
Badi waxa uu raaci jiray geela oo ah ishinka ugu qiimaha badan xoolaha. Raacista iyo xerinta geela waxa uu ka bilaabay derajada dabadhoonka, isaga oo kor uga sii dallacay gaadhayna in uu keligii xeriyo. Weligii ma uu arag darxumo iyo diihaal toona, waxa gacanta ku haysa hooyadii macaan oo habeenkii legga galisa, waayo waa guurudambays aan cidi ka xigin dhabta hooyadii. Ma yaqaan cilmi aan ka ahayn raadka geela iyo raacdayntiisa. Iyada oo ay sidaas tahay ayaa hilaaddii 2003-dii, waxa xaqi u yimid aabihii eebe ha u naxariistee. Intaas ka dib hooyadii macaan waxa ay fikir iyo faallaba u gashay sidii ay guurudambayskeeda ugu tuntuunsan lahayd dhanka aqoontiisa oo ay magaalo u geyn lahayd, si uu qalin wax ugu goosto. Maadaama caruurtii kale iyagu wada gaashaanqaad noqdeen oo wax guursaday iyo wax guur u jooga yihiin, in isaga uun ay ku tacabto dhanka diiniga iyo maaddigaba.
Hooyadii, Mawle ha maamuusee, waxa ay u soo xamaan guratay meel magaalo ah oo ka dhawayd deegaanka ay degaan. Daas yar bay ka furatay, hadafkeeduna waa sidii ay goob waxbarasho uga soo ag dhawaato si ay ugu darto wiilkeeda yar. Soo degtay, markii ay daaskii yaraa aasaastay, ayay tidhi iga dabakeena inanka. Loo keen, waa wiil yar oo aan weligii magaalo arag. Markii ugu horreysay ee uu soo galay meheraddii hooyadii, waxa uu xusuustaa in uu jiidhay kursi bir ah oo yaallay albaabka agtiisa, hala yaabin maantaa ugu horreysa meel daar ah ama derbibee.
Hooyadii waxa ay la ogaatay dhanka diinta oo markiiba waxa ay ku dartay malcaamad Qur’aan. Markii uu indha dilaacsaday ee uu dhawr jis dhigtayna waxa ay ku dartay iskuul ka jiray tuulada. Waa wiil ku soo barbaaray caano geel iyo hawsha teeda adage, markiiba wuu la qabsaday waxbarashada waxa uuna ka mid ahaa ardayda ka dhex muuqata iskuulka iyo malcaamaddaba.
Dhawr sanno oo uu dhiganaayay baa ka soo wareegay imika, waxa uuna gelayaa fasalka 6-aad ee dugsiga hoose/dhexe. Mar labaad, hooyadii waxa ay xoog iyo xeeladba ku bixisay in ay inankeeda geyso magaalo tan ka aqoon badan, waayo tani waa tuulo oo aqoonta taallaa sidaas u ma badna, waxana ku badan iska ciyaalasuuq oo waa tuulo. Waxa ayna ka baqatay in uu ka raaco yaryarka tuulajooga ah ee nolosha balwadda bilaabay, taas baana ku kalliftay in ay u hawl gasho sidii ay caasimadda u geyn lahayd.
Ehel iyo qaraabo wax ay la galagalaysataba, keentay caasimaddan hadda uu ku nool yahay ee Hargaysa. Waxbarashadiisii, ka bilaw fasalkii uu maraayay ee ahaa lixaad. Waa wiil ku soo ababay dhiirrigelin iyo talo-siin hooyo. Waa wiil lagu soo habay nolol ka dheer niyadjab iyo rejo dhigisba, waxa uuna sugayaa in uu intii in le’eg kala kulmo qoyskan cusub ee ehelka ay yihiin, si uu magaalada u la qabsado oo aqoon badan ka faa’ido. Tolow muu ka heli dhiirigelintii hooyadii oo kale ee ay subax kasta marka uu goobta waxbarasho sii aadayo ay ku odhan jirtay? "Si wacan wax u soo baro oo igu soo noqo adiga oo wax soo faa’iday?” Maya ma ay dhicin taasi, wixii uu rejaynayay wax ka geddisan baa dhacay.
Waxa uu la kulmay niyadjebin joogto ah. Waxa gadhka loo daray galaan quus ah, waxa si taban iyo si togabna loogu hoga tusaaleeyay nolol aanu higsigeeda mooyee hanashadeeda hayn. Mar kasta oo uu ka yimaaddo goobta waxbarasho, waxa uu guriga ku galaa xiisad kale oo ku furta tashuush kuna noqotay iskiisad maskaxdiisa qaybta uididiillada iyo hammiga sare madoobaysay. Waxa loo ladqabaa oo lagu yidhaa "iskaga bax waxbarashada oo miyigii iska qabo oo iska guurso, markaas baad badhaadhe cagaha daraysaaye.” Ma xili arrimo guur iyo wax looga sheekeeyaaba, waa xilliga ay maskaxdu ku korto ee ay ku shidaal qaadato dhiirrigelinta iyo garab istaagidda aqoontee.
Waxa aan weli maankiisa ka go’in, maalin uu kaalin wanaagsan ka keenay iskuulkii uu dhiganaayay oo uu deeq waxbarashana ka helay isla iskuulka. Markii uu yimid gurigii, waxa uu filaayay hambalyo iyo bogaadin, bal se may dhicin. Waxa si canaan iyo ku qaylini ku ladhan tahay looga horkeenay: ”Saaqid baad tahay. Ka maad shaqayn adigu. Waa lagaaga shaqeeyay oo waad qishtay. bahal dhintay baad tahay, oo aan midhkaas garanayn.” Hadalladaas iyo kuwo la mid ah baa loo miisay yarkii hambalyada sugayay. Ka ma tegi karo gurigan uu kala kulmayo waxan, waayo waa meesha keli ah ee taga u ciirsiga ah ee uu ku tiirsanyay. Wuu iska samray, fasaxyadana hooyadii buu iskaga tagaa. Cidna u ma sheego waxa haysta, aan ilaahay ahayn. Fasax kasta marka uu tuuladii ku noqdo, waxa uu tagaa barbaartii ay isku lodka ahaayeen oo wada koray, muruqyaduna wada waaweynaadeen. Laakiin isagu wuu tafeeno yaraa uun, markaas baa lagu yidhaa "waar maxaa ku hagaasiyay ee ay ishaadu isla beddeli weyday, caasimaddiina waad joogtaaye?” Isna inta uu waayihiisa laabta ku qarsado, ayuu yidhaa yaa duulkan ku yidhi caasimad baa lagu naaxaa, waxa nagu haysta ayaanay ogaynbee, maxaanu taransannaa, waagii dilaacaba fikir baanu ku jirnaaye?
Marka aad niyad ahaan dhisan tahay ayay cunto wax kuu tartaa. Weligii gaajo ku muu seexan. In ay kala dagaallamaan aqoonta mooyee, dhanka cuntada wuu la cunaa xaafadda waxa lagu kariyo. Waxa uu sidii ahaadaba waxa uu dhammeeyay dugsigii hoose/dhexe, fasalkii 8-aadna waxa uu kaga gudbay derajo fiican oo ah "A.” U soo gudub dugsi sare. Waxa uu ku biiray mid ka mid ah dugsiyada sare ee caasimadda. Dedaalkiisii iyo dulqaadkiisii buu ku bilaabay marxaladdan kalena. Wakhtigaa uu soo galay dugsiga sare, waa wakhtigii ay dalka ka bilaabmatay waxa aan u qaan ”daaduumka dal shisheeye”, waa tahriibtee.
Isla markiiba waxa lagu bilaabay mawjad ah "iska tahriib oo berri ka maalin ka soo hadal Yurubtaa hore u martay.” Waxa loogu ballan qaaday in illaa Liibiya laga bixin doono kharashka, se waxaas dhag jalaq u ma siiyo ee waxbarashadiisa ayuu ku fooggan yahay. Imtixaankii kowaadba waxa uu helay deeq waxbarasho oo dugsiga sare ee uu dhigan jiray ah, dhanka gurigana waxa kaga socda niyadjabkaas ah "iska tahriib.” Laakiin waxa uu ka fikiray xaaladda ay taasi gelin doonto hooyadiisii ku soo tacabtay ee xoog, xoolo iyo xeeladba u soo hurtay ee illaa hadda la daba taagan talo ,taagero iyo tudhaaleba. Niyadjab iyo fikir isaga oo daashaday, dhammee iskuulkii sarena. Isaga oo aan da’ ahaan waynayn ayuu yeeshay astaamihii 80 jirka. Waxana ugu wacan fikir, werwer iyo walaac ka beermay hadalladii quusta ahaa ee uu la kulmaayay waagii barya iyo gabbalkii dhacaba.
Marka aad la kulanto ayaad garanaysaa in uu yahay ruux ku soo koray halgan nololeed, uu yahayna ruux bislaaday. Nolol 10 sanno ah oo uu dhanna aqoon ka waday, dhanna u dulqaadanaayay niyadjabka, waxa uu ka helay duruus aan abid soo mari doonin. Hadda waxa uu ku biiray jaamacadda waana sannadkii saddexaad.
W/Q:Mahad M. Qaasim